site admin na 21-07-09
Ntụle nke PP na PE eriri
Na nso nso a, a ahịa jụrụ price nke polypropylene eriri, ndị ahịa bụ a emeputa nke azu net mbupụ, a na-ejikarị bụ polyethylene eriri, ma polyethylene eriri ọzọ siri, mfe atọpụ mgbe knotting, na uru nke ewepụghị waya eriri bụ na monofilament nke eriri bụ ...
Ụzọ maka igbochi mgbaji eriri hemp
The hemp eriri ọtụtụ-eji na anyị kwa ụbọchị ndụ, na-enwe mmasị nke ndị ahịa na nkwado, iji hụ na nkịtị ojiji nke bundling eriri, eriri enweghị ike enịm ke keguru mmiri na gburugburu ebe obibi, ọ bụghị na n'èzí gburugburu ebe obibi nchekwa, ogologo. n'okpuru anyanwụ na ifufe na mmiri ozuzo baptizim, ọzọ...
A na-eji eriri polyethylene / PP eme ihe na ndụ kwa ụbọchị
Polyethylene nwere ezigbo nkwụsi ike nke kemịkalụ ma nwee ike iguzogide itughari nitric acid, itughari sulfuric acid na ntinye ọ bụla nke hydrochloric acid, hydrofluoric acid, phosphoric acid, formic acid, acetic acid, amonia, amine, hydrogen peroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide na ngwọta ndị ọzọ. ...
Okwu mmalite nke ozuzu eriri
A na-esi n'ụdị akpụkpọ osisi a na-akpọ hemp na-eme eriri ugbo nke a na-eme ka ọ bụrụ eriri.A na-eji ngwaahịa emechara eme ihe n'akụkụ ọ bụla nke ndụ anyị.Isi njirimara nke eriri ozuzu bụ mgbochi corrosion, eyi nguzogide, ike siri ike, mgbochi ịka nká, nkwụsị nkwụsị, ngwaahịa kpara nke ọma ...
Ọrụ na mkpa nke ụgbụ ụdọ
A na-eji ụgbụ nchekwa nchekwa eme ihe na ebe a na-ewu ihe ugbu a na oge ndị ọzọ, ọrụ ya bụ isi bụ ichekwa nchekwa nke ndị ọrụ ụlọ, ebe ọ na-egbochi ọnwụ nke ndị ọrụ na ihe onwunwe nke ihe ndị na-adaba na-ada site na elu elu na-arụ ọrụ nke ụlọ elu dị elu. .S...
A na-ejikarị eriri eriri nchekwa na-egbochi ndị mmadụ na ihe ndị na-adaba ma ọ bụ iji zere ma belata mmebi nke ihe ndị na-ada ada, iji chebe nchekwa nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ dị elu na ndị na-agafe agafe na iji nọgide na-adị ọcha nke saịtị ahụ. Njupụta nke ụdị a. ụgbụ ụdọ dị elu, nkịtị ve...
Akpachara anya maka nchekwa nke eriri eriri
Ụdọ plastik - eriri eriri nke a na-ejikọta ya bụ, dọka ihe nkiri ahụ, na usoro nke iji ya adịghị ekwe ka ọ bụrụ nke a na-ejikọta ngwa ngwa, a pụghịkwa itinye ya n'ụzọ doro anya na ngwa ngwa, ka ọ ghara imebi eriri ahụ adịghị ike. Ọzọkwa. , ngwa ya dị mfe, otu onye nwere ike ime ...
Ịzụta ụdọ net na-ejikọta eriri kwesịrị ịṅa ntị n'ihe
N'ime usoro ịzụrụ eriri eriri, anyị na-etinyekarị uche na ọnụahịa ahụ, ma na-eche na ọ dị ọnụ ala karịa, ma ọ bụrụ na ejiri eriri eriri dị ọnụ ala karịa oge dị mkpirikpi, ọnụ ahịa ya dị elu karịa ọnụahịa nke eriri eriri mbụ. mgbe akaụntụ.Na ịzụrụ nke fir ...
Lezienụ anya na iji ụgbụ ụdọ
(1) ihe nlele ọdịnaya nke ụgbụ ụdọ gụnyere: ụgbụ agaghị ahapụ ụlọ mkpofu, ụgbụ ahụ enweghị ike ịgbakọ ihe, ụgbụ ahụ enweghị ike ịpụta nnukwu nrụrụ na iyi, yana ma ọ ga-emetọ ya site na kemịkalụ na acid, alkali. anwụrụ ọkụ na ịgbado ọkụ ọkụ.(2) nkwado fr...
Usoro mmepe ụlọ ọrụ netwọkụ na-ebuli elu
1. The branding nke hoisting netwọk ngwongwo Na-aga n'ihu mmepe omume nke elu na nkà na ụzụ ọhụrụ, nwere ọgụgụ isi usoro ga-abụ ntụziaka nke mmepe omume nke China hoisting ngwá ọrụ n'ichepụta ụlọ ọrụ. Maka hoisting ngwá ọrụ na-eji ụlọ ọrụ, nwere ọgụgụ isi usoro nwere ike g ...
Ịkpọgide ụgbụ a na-eji maka ebuli ụgbụ, akụrụngwa bụ n'ozuzu naịlọn, vinylon, polyester, polypropylene, polyethylene, silk ma ọ bụ waya eriri, etc.Hoisting net na-ekewa n'ime nkịtị nchekwa nghọta net, ire ọkụ retardant nchekwa nghọta net, ok ntupu nchekwa nghọta net. na mgbochi ọdịda nghọta net...
Kedu otu esi ahọrọ ụgbụ ụdọ?
A na-ekewa ụgbụ ụdọ na ụdị mpempe akwụkwọ na ụdị akpa.Ụgbụ ụdọ ahụ nwere njirimara nke siri ike, ogologo oge, ịdị mma na ìhè. Netwọk dị ka nhazi ọkwa dị iche iche nke ihe ahụ dịkwa iche iche, ọrụ ahụ dịkwa nnọọ iche.
Ụgbụ eriri USES
MPVs na SUVs n'ozuzu nwere nnukwu nchekwa nchekwa n'ime akpati maka ihe dị iche iche dị iche iche. Ma mgbe ọsọ ọsọ na-agbanwe ma ọ bụ bumps na usoro nke ịkwọ ụgbọala, ihe nchekwa akpa dị mfe ịkwaga elu na ala ma ọ bụ na-atụgharị azụ na azụ, ihe ga-emetụta. onye ọ bụla ọzọ, n'otu oge ahụ ihe ga-akụ th ...
Ụgbụ nke eriri na azụ
Ugbu a ụlọ elu dị elu na-ebili n'ala, ma onye nwere ike ịṅa ntị na onye nọ n'azụ nke a na-agbachi nkịtị, ọrụ na-etinye ihe ize ndụ dị ukwuu, iji hụ na ahụ maka ndị mmadụ, ga-ahụ ụgbụ ụdọ.1. Safety net ga-atụkwasịrịrị n'okpuru akụkụ ọrụ dị elu; Mgbe ịdị elu nke ụlọ ahụ gafere ...
Elu polymer polyethylene eriri na-mere nke elu polymer polyethylene eriri ike dị nnọọ elu na sịntetik eriri, ike ya nwere ike iru 1.5 ugboro nke otu nkọwa ígwè waya, na elongation bụ nnọọ ala, nwere ike tụnyere na-agbasa ogologo nke ígwè ígwè. waya.The cable ara...
Njirimara eriri PP
A na-edozi eriri plastik PP nke ụdọ ụdọ site na ọkwa mbụ nke nlọghachi azụ, nke nwere àgwà nke ike dị elu, na-eguzogide ọgwụ, nkwụsị nke corrosion, dị nro na nro, mmetụta dị mma na ihe ndị ọzọ.A na-eji ya na uwe, akpụkpọ ụkwụ, onyinye nka, akpa aka, ihe egwuregwu ụmụaka, ụlọ ọrụ ...